Disinfecting कार वातानुकूलन: उपकरण, मार्गदर्शन
आजको आधुनिक कार मोडेल, पनि आधारभूत संस्करण सान्त्वना बनाउन विशेष यांत्रिक हालतमा संग सुसज्जित। तिनीहरूले निश्चित वातानुकूलन वा जलवायु नियन्त्रण प्रणाली समावेश गर्नुपर्छ। यी उपकरणहरू वाहन भित्री सान्त्वना को सर्वोत्कृष्ट स्तर सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। फलस्वरूप, ड्राइभर र यात्रु तातो र आर्द्र मौसममा सन्तोषजनक लाग्छ। साथै, चालक खुला पक्ष Windows संग वाहन संचालन हस्तक्षेप सक्ने बाह्य stimuli द्वारा विचलित छैन। त्यसैले, ड्राइभिङ सुरक्षा वृद्धि गरिएको छ।
Climatic avtosistemy कार्यहरू एक फरक सेट समाधान गर्ने मौका प्रदान गर्न। तर यस्तो उपकरणहरूको लागि स्वास्थ्य आफ्नो इष्टतम स्तर कायम र वाहन भित्र odors हटाउन स्थिर र गुणवत्ता हेरविचार आवश्यक छ। यसबाहेक आवधिक सफाई र चार्ज बाहिर र नियमित disinfection वाहन एयर कंडीशनर गर्नुपर्छ।
त्यसैले कि जलवायु प्रणाली आवश्यक छ?
वातानुकूलित - ड्राइभर र यात्रु को सानो घर मा एक आरामदायक रहन निर्णय लागि वाहन स्थापित विशेष प्राविधिक उपकरण। र पनि पर्यावरणीय कारक जोखिम देखि अन्तिम सुरक्षा गर्न। उपभोक्ता बजार मा climatic avtosistem को एक विशाल विविधता छ। तिनीहरू सबै प्राविधिक विशेषताहरु, सुविधाहरू, वाहन बनाउन र निर्माता अनुसार वर्गीकृत छन्। आज, वातानुकूलन - यो वाहन संग सुसज्जित हुनुपर्छ जो, लक्जरी र बाध्यकारी उपकरण एक माध्यम हो। र वाहन मोडेल एचभिएसि उपकरण लागि प्रदान गर्दैन भने पनि, यो आफ्नै माउन्ट हुन सक्दैन। उचित हेरविचार संग, यन्त्र चालकले र यात्रु को एक स्थायी सान्त्वना सिर्जना गर्नेछ। र मालिक स्वतन्त्र यो प्रश्न हल गर्न सक्छन् भने आफ्नो हातले वाहन एयर कंडीशनर को disinfection रूपमा, त्यसपछि सेवा लाभदायक हुनेछ। प्रत्येक समय सेवा केन्द्र गर्न सानो घर मा खराब गन्ध छैन। किनभने कंडीशनर को भित्री भागहरु मा समय को खण्ड संग Fungi र मोल्ड रूपमा विभिन्न हानिकारक सूक्ष्मजीवहरु गठन गर्न थाल्छन्।
यो प्रक्रिया को expediency
हामी यस्तो कार एयर कंडीशनर को disinfection रूपमा प्रक्रिया आवश्यकतालाई कुरा भने, खातामा उद्देश्य र आत्मपुरक कारक लिन आवश्यक छ। पहिलो मान्छे को इच्छा निर्भर छैन, उत्तरार्द्ध आफ्नो कार्यहरू मा पूर्ण निर्भर छन्।
विशेष ध्यान ती मोटर चालकहरुलाई गर्ने तेस्रो पक्ष Smells एलर्जी प्रतिक्रिया भएका परिवारको या त सदस्य छन् भुक्तान गर्नुपर्छ, उदाहरणका लागि asthmatics छन्। यस मामला मा, वाहन वातानुकूलन को आवधिक disinfection अवश्य छ। पनि फोहोर हावा धेरै संक्रामक रोगहरु को कारण छ कि भूल छैन।
यो प्रक्रिया पूरा, तपाईंले स्वामित्व वा विशेषज्ञको सहयोग संग गर्न सक्नुहुन्छ। आज जो कोहीले मा विशेष autoshops हावा कंडीशनर कीटाणुरहित गर्न उपयुक्त माध्यम पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई प्राप्त यात्री कक्ष मा अप्रिय odors को छुटकारा मदत र खराब सूक्ष्मजीवहरु को proliferation रोक्न हुनेछ। विशेषज्ञहरु कार वातानुकूलन को शीघ्र disinfection छैन केवल सानो घर मा सामान्य वातावरण सकारात्मक प्रभाव छ, तर पनि यो उपकरणको सही सञ्चालन सुनिश्चित भन्छन्।
कसरी अक्सर तपाईं यो प्रक्रिया प्रदर्शन गर्न आवश्यक?
धेरै मोटर चालकहरुलाई यो प्रश्न। उपचार को आवृत्ति वातानुकूलन, वाहन को दूरी, र अन्य सिस्टम प्रदर्शन मोडेल को प्रयोग को विधि मा निर्भर गर्दछ। मात्र खातामा सबै डाटा को totality लिएर, यो वाहन एयर कंडीशनर को disinfection फ्रिक्वेन्सी भन्ने निष्कर्षमा पुग्न गर्न सम्भव छ।
त्यहाँ फिल्टर को एक सेट छ वातानुकूलन, को मोडेल हो, त्यसैले तिनीहरूले गर्म र बेहवा सिजन अघि जीवाणुरोधी सफाई सञ्चालन। हिउँदमा, हावा कंडीशनर वाहन भित्री लागि ताप प्रयोग गरिन्छ। एउटै उद्देश्य सम्हाल्न सक्नुहुन्छ र चुलो वाहन संग। तसर्थ, यी गुणहरू मा जानकारी, हावा कंडीशनर विशेषज्ञहरु सिक्न सक्नुहुन्छ, र यन्त्रमा निर्देशनहरू पढ्नुहोस्।
कार मालिक कसरी कार मा वातानुकूलन आफ्नै, यसले छैन सानो घर मा एक अप्रिय गन्ध संग समस्या कीटाणुरहित गर्न थाह भने। उहाँले कुनै पनि समयमा बाहिर आफ्नो वाहन मा उपकरणको सफाई बोक्न सक्छ। वर्ष एक पटक भन्दा कम छैन - अहिलेसम्म यो प्रक्रिया फ्रिक्वेन्सी लागि केही सामान्य सिफारिसहरू छन्।
हामी कसरी कार बाहिर वातानुकूलन को disinfection बोक्न सक्छ?
विधि आधारमा र सफाई प्रदर्शन गर्न सक्षम छ विभिन्न फेंकना disinfecting प्रकार एचभिएसि वाहन यन्त्र।
मार्गदर्शन यांत्रिक काम पूरा
, फिल्टर प्रतिस्थापन सारा जलवायु प्रणाली, यो ट्यूब मा धूलो र माटो को छुटकारा प्राप्त गर्न मौका दिन्छ बुझ्नुहुन्छ सर्द थप्नुहोस्। यस्तो विधि मात्र होइन समय, तर पनि उपकरण केही ज्ञान र एयर कंडीशनर को सिद्धान्त आवश्यक हुनेछ। प्रणाली को फलस्वरूप सबै हानिकारक जीवाणु हटाइएका छन्। अपरेसनमा, एक कुनै वाहन एयर कंडीशनर disinfection तरल (एक विशेषता स्टोर वा घर चिकित्सा मन्त्री उपलब्ध मा खरिद, एक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने तयारी छ उदाहरण chlorhexidine लागि) प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रक्रिया पुरानो हावा-कंडीशनिंग प्रणाली संग वाहन लागू हुन्छ। यो disinfection सबैभन्दा परिष्कृत संस्करण हो कि टिप्पण लायक छ।
एक अल्ट्रासोनिक उपचार कंडीशनर सञ्चालन
यो वाहन सेवा हो को लागि विशेष केन्द्र मा बाहिर छ। यसलाई विशेष उपकरण प्रयोग र वातानुकूलन को disinfection लागि हो। अल्ट्रासाउंड क्लीनर उत्पादन आवश्यक गुणस्तर प्रक्रियाहरु पूरा गर्न। को सूक्ष्मता dispersed मिश्रण जलवायु प्रणाली मार्फत recirculation मोडमा सञ्चालन समयमा बित्दै भनेर यो सिस्टम मा स्थापित छ। यो मात्र होइन उपकरण सबै भागहरु, तर पनि कार देखि जीवाणु हटाउन अनुमति दिन्छ।
कुनै पनि विशेष disinfection हालतमा प्रदर्शन
आफ्नै यो प्रक्रिया गर्न, तपाईंले एउटा विशेष गुण आवश्यक स्प्रे disinfection वाहन एयर कंडीशनर। उहाँले वातानुकूलन प्रत्येक प्रकार को लागि व्यक्तिगत रूपमा चुनिएको छ। कार्य गर्दा यस्तो प्रक्रिया स्प्रे को बाष्पीकरण निर्देशित छ। यो मा सूक्ष्मजीवहरु को फंगल प्रजनन गर्न सबैभन्दा susceptible छ कि उपकरण भाग हो। को disinfecting प्रक्रिया जलवायु प्रणाली समयमा recirculation मोडमा र अधिकतम शक्ति मा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसरी, स्प्रे अन्य भागहरु र उपकरणहरू तंत्र सम्झना गर्छन।
जब आफ्नो हात वातानुकूलन disinfected संग यस्तो कार छ, सम्पूर्ण एकाइ खोल्ने कुनै आवश्यकता छैन त्यहाँ छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया निम्न प्रक्रियाहरु हुन्छन्:
पहिलो, तपाईं अलमल्ल पार्नु र हटाउन आवश्यक छ पराग फिल्टर। तिनीहरूले सिस्टम को काम मा भित्र पस्नु गर्न हस्तक्षेप।
थप यो जांच-बन्दूक क्लीनर प्रयोग र बाष्पीकरण पठाइएको गर्न आवश्यक छ। यो तपाईं पूरै सिस्टम ह्यान्डल गर्न अनुमति दिन्छ।
असाधारण अवस्थामा प्रक्रिया disinfecting लागि कंडीशनिंग प्रणाली को विधिहरू को संयुक्त प्रयोग। उपकरण अक्सर साफ छ भने यो आवश्यक हुन सक्छ। यहाँ प्रणालीको पूर्ण विश्लेषण को यांत्रिक सफाई मद्दत गर्न सक्छ। विशेष एजेन्ट को प्रयोग हानिकारक सूक्ष्मजीवहरु को पुन उद्भव विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। यस मामला मा, chlorhexidine वाहन एयर कंडीशनर संग प्रभावकारी disinfection। एक प्रक्रियाहरु4बोतल आवश्यक समाधान को 100 एमएल।
पहिलो, तपाईं सबै फिल्टर प्राप्त गर्न उपकरण आफैँ खोल्ने गर्न आवश्यक छ।
यो घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने, राम्ररी ड्राई संग sprayed पूरा।
disinfection पछि सानो घर मा एक सुखद गन्ध लागि, तपाईं सुगन्ध तेल को केही घटेको थप्न सक्नुहुन्छ।
को जलवायु सिस्टम को विधानसभा पछि यो केही मिनेट लागि अधिकतम शक्ति मा ड्राइव आवश्यक छ।
यो जलवायु प्रणाली - वाहन को एक आरामदायक प्रयोग गर्न कुञ्जी। तर तिनीहरूलाई पछि लगातार हेरविचार र सबै मुख्य भागहरु र तंत्र नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। र गर्मी मौसम अघि विशेष हालतमा संग सिस्टम ह्यान्डल गर्न आवश्यक छ। यो यसको प्रयोग को अवधि वृद्धि हुनेछ, र वाहन भित्र अप्रिय odors को छुटकारा गर्न।
तार उच्च भोल्टेज ज्वलन: उद्देश्य, शोषण
उल्टो मा समानान्तर पार्किंग छ कि जटिलता
तपाईंको आफ्नै हातले जनरेटर मा ब्रश कसरी परिवर्तन गर्न - चरण निर्देशनहरूको र सिफारिसहरू द्वारा चरण
जहाँ CTP गरेर बीमा कम्पनी गर्न गुनासो?
गर्भावस्था मा एन्टिबायोटिक
कसरी तयारी विभिन्न स्तर मा चरणमा एक स्याल पेन्सिल आकर्षित गर्न
कसरी हिउँदमा स्वादिष्ट सलाद तयार - केही राम्रो व्यञ्जनहरु
पिंजरा बिरुवाहरू। बिरुवा सेलहरूको विशेषताहरू
सबै संचालक लागि मोडेम अनलक
पानी pistols र अन्य स्नान खिलौने बच्चाहरु
किया Quoris: विनिर्देशों, प्याकेजिङ्ग, समीक्षा
दुई टोन पोशाक: विशेष मोजा र हेरविचार
"नोकिया 225": विशेषताहरु र peculiarities